Sidee Astaamaha Calaamadaha Suuqgeynta Dhaqanka iyo Dijital ah ay u beddelayaan sida aan wax u iibsanno
Axad, Febraayo 28, 2021 Axad, Febraayo 28, 2021 Diogo Voz
Warshadaha suuqgeynta waxay si qoto dheer ugu xiran yihiin dabeecadaha aadanaha, howlaha joogtada ah, iyo isdhexgalka taas oo muujineysa ka dib isbedelka dhijitaalka ah ee aan soo marnay shan iyo labaatankii sano ee la soo dhaafay. Si ay nooga sii mid ahaato, ururadu waxay kajawaabeen isbedelkan iyaga oo ka dhigaya istiraatiijiyado isgaarsiineed warbaahinta bulshada ee dhijitaalka ah qayb muhiim ah oo ka mid ah qorshayaashooda suuq geynta ganacsiga, hase yeeshee uma muuqato in marinadii dhaqanka laga tagay. Dhexdhexaadinta suuq-geynta dhaqameed sida boorarka, joornaalada, joornaalada, tv-ga, raadiyaha, ama xaashida oo ay weheliyaan suuq geynta dijitaalka iyo bulshada
Waa Halku dhig? Hal-ku-dhigyada Calaamadaha Caanka ah iyo Evolution-kooda
Sabtida, Diisambar 13, 2014 Jimco, Diisambar 12, 2014 Douglas Karr
At DK New Media, halheyskeenu waa inaan ka caawinno shirkadaha inay la kulmaan awoodooda suuq geyn. Waxay ku habboon tahay adeegyo badan oo aan bixinno - laga bilaabo la-tashiga wax soo saarka, horumarinta nuxurka, hagaajinta suuq-geynta internetka… wax kasta oo aan sameyno waa in la aqoonsado dulduleelada istiraatiijiyadda iyo in laga caawiyo shirkadaha inay buuxiyaan meelaha banaan. Weli maynaan gaadhin in la sumadeeyo, in la soo saaro fiidiyoow fayras ah ama aan ku darno 'ing laakiin waxaan jeclahay fariinta
CrowdTwist: Dhiirrigelinta, Aqoonsiga iyo Abaal-marinta Daacadnimada
Isniin, Janaayo 20, 2014 Douglas Karr
CrowdTwist wuxuu bixiyaa barxad calaamadeysan oo cad, falanqeyn casri ah iyo suugaan dhameystiran oo maareynta iyo qalabka soo gudbinta si loo dhexgeliyo, loo bilaabo, loo maareeyo, loona kordhiyo dadaalkaaga dhismaha. Dhawaan waxaan wareysi weyn la yeelanay Irving Fain oo ku yaal Edge-ka Webka Raadiyaha waxayna na siisay aragti ku saabsan shirkad runtii saameyn ku yeelata suuq geynta shirkadaha iyo abaalmarinta. Ololaha Xaqiijinta CrowdTwist X Haddii aad rabto inaad aragto sida wanaagsan ee la isugu duubay, ololaha qaran loo fulinayo, ha u eegin maya
Sirta Dhisida Sumaddaada sida Nike ama Coca-Cola
Isniin, February 15, 2010 Axad, Maarso 24, 2013 Grant Lange
Qaab dhismeedka calaamadeynta Mareykanka, runti waxaa jira kaliya labo nooc oo noocyo ah: macaamiisha diirada saarey ama diiradda saarey wax soo saarka. Haddii aad samayn doontid wax shaqo ah oo ku meeraysanaya astaantaada, ama lagu siinayo lacag si aad ula dhex wareegto astaanta qof kale, si wanaagsan ayaad u garanaysaa nooca summaddeed ee aad haysato.
Daadinta Super Bowl ee Warbaahinta Dijital ah
Sabtida, Diisambar 26, 2009 Jimco, Juun 9, 2017 Douglas Karr
Ganacsiyo aad u tiro badan ayaa qaadanaya tikniyoolajiyadda markay tahay istaraatiijiyaddooda suuq-geyn. Markii Pepsi uu ka baxay Super Bowl-ka, saxafiyiinta dhaqanka waxay ku tilmaameen qamaar. Ma xayaysiinta Super Bowl waa khamaar? Runtii? Xayeysiinta Super Bowl waxay ku kacaysaa $ 3 milyan doolar 30kii ilbidhiqsi. Pepsi wuxuu qorsheeyey laba 30 xayeysiis xeeb ah iyo 60 ilbiriqsi oo labaad… taasi waa $ 12 milyan. Qiimuhuna wuxuu kor u dhaafay 10% intii u dhaxaysay 2008 iyo 2009. Aynu